UPeter Ustinov, okungaphezulu kakhulu komlingisi. Izincwadi nemisebenzi yakhe | Izincwadi Zamanje
UPeter Ustinov, okungaphezulu kakhulu komlingisi. Izincwadi zakhe nemisebenzi
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Abalobi, Amabhuku, I-Novela
UPeter Ustinov Isithombe: (c) Allan Warren.
Peter Ustinov wayengeyena nje umlingisi, kepha a umculi ogcwele. Yize i- Cine yamnika ingunaphakade ngokuhlanganisa abalingiswa njengaphakade njengombusi Nero de who vadis (akekho ongakucabanga ngobunye ubuso), u-Ustinov naye wayenjalo umqondisi, umbhali wesikrini, umdwebi, umculi nomlobi yomibili imidlalo yaseshashalazini, amanoveli nezindaba ezimfushane. Ngaphezu kwalokho, wabhala ama-autobiographies amabili futhi wayekhuthele kakhulu ohlangothini lwakhe olusekela kakhulu. Lokhu yi ukubuyekeza empilweni yakhe nasemsebenzini wakhe wokubhala kakhulu kulo Julayi wesinema enginawo.
2 Impilo iyi-operetta
4 Indoda endala noMnu Smith
6 Isithandwa sami nami neRussia yami
Wazalelwa London Ephreli 16 1921, eSwitzerland Cottage, endaweni yaseHampstead. Kusuka ku- abazali baseRussia owabaleka ngenkathi i-Revolution ka-1917 ithweswa iziqu ku Isikole saseWestminter, bese ngibhalisa ILondon Theatre Studio. Kepha ngaphambi kokuphothula izifundo zakhe kwezobuciko obukhulu, wenza emakamelweni enza ukulingisa abalingiswa abaziwayo.
Uqale ukubonakala eneminyaka engu-19 njengoba umlingisi emsebenzini ayewubhalile futhi, ngasikhathi sinye, wayesebenzela abezindaba nomsakazo. Usebenze ku- Impi Yezwe Yesibili lapho ayengaphansi kokuyalelwa yisikhulu esigama laso David Niven, lapho abhala khona i-screenplay sakhe sokuqala kamuva ngo-1952.
Ngonyaka ngaphambili u-Ustinov wayenikeze impilo Nero en Quo Vadis, ufinyelela ifayela le- impumelelo yomhlaba obekulokhu kuhamba naye. Unqobile ama-Oscars amabili ngeLentulo Batiatus yakhe angasoze ayilibale Spartacus futhi I-Topkapi. Futhi wabhala imibhalo izinhlelo zethelevishini, ngaphezu kwe ukuziqhenya y izindatshana yamatimu wezenhlalo. Futhi bekufanele kakhulu Hercule Poirot.
Kwakunjalo futhi umqondisi womabili amabhayisikobho ne-opera, owayethanda kakhulu, kanye nomdwebi kanye nesishoshovu esikhulu sobumbano kubanga okwaholela ekubeni abe yinxusa lomusa we-Unicef.
Impilo iyi-operetta kungumbono obukhali wezwe elihlala liwa, yize abalingiswa balo bezalwa kabusha kuyo yonke iminyaka.
Imingcele yolwandle. Ihlelwe edolobheni elisogwini lwaseSpain, inezinkanyezi ngamadoda amabili aphikisanayo, umdobi omdala ongafundile futhi ophahlazeke umkhumbi wase-Albania, abakha ubudlelwano obuseduze ngaphandle kwamagama kodwa phesheya kolwandle.
Amaphupho ePapua kuyisihlukumezi esishubile enkolweni yokulamula nokuvikela kwaseMelika okunolaka.
Ababulali Imayelana neqembu lamadoda amadala angenabungozi amemezela ukuthi ahlose ukwenzani ukuze amiswe.
Inja enesiphiwo kusiyisa esigabeni esiphakeme samaNgisi ukuchaza indlela yabo yokuphila nezimo zabo zengqondo, ikakhulukazi, maqondana nomshado.
Ukuqeda, UNkulunkulu nojantshi bombuso y Inkemba kasilika bayaqhubeka nokungena ekujuleni kwezithombe zengqondo zesimo somuntu u-Ustinov asibonayo futhi asihlaziya.
UBart Krumnagel uyena ophambili wale noveli eyenzeka edolobheni elikhulu lapho ekhona el umphathi omkhulu wamaphoyisa. Ihlala ihlukumeza izigebengu nalabo abazama ukonakalisa noma ukuphambukisa izindlela zokuphila ezimisiwe. Konke ngendlela engenacala kepha engapheli, ekugcineni, ephenduka impindiselo enobudlova. ngokumelene nenkohlakalo.
Indoda endala noMnu Smith
Isisekelo esithandekayo kulokhu uhambo lwezithandani olumangalisa kakhulu lokho kungacatshangwa: UNkulunkulu nodeveli. Bobabili kumele benze i- ukutadisha isikhathi samanje. Inkinga ukuthi ukungafi kubenza bangaguquki kahle kulezi zikhathi.
Ngakho-ke, ngokushesha, bamiswa ngamaphoyisa lapho befika eNyakatho Melika, besolwa ngokwethula imali yomgunyathi. Ngokusobala ukweqa kwabo kuzoba lula futhi bazoqhubeka nokubaleka kwabo emhlabeni. Futhi kulezo ama-avatar abiwe uzoba nesikhathi sokukhombisa i- imizwa yabantu engaphezulu futhi uthethelele amagqubu angunaphakade.
Iqhawe elingaqondakali kodwa elizwelana nozwelo kule noveli yilona UHans winterschild, owazalwa ngesikhathi esifanele sokuba yindoda eminyakeni ye Hitler. UHans uzothandana no isifebe esinenkathazo futhi esidabukisayo esineminyaka engu-16, okuzothinta impilo yakho kuze kube phakade.
Isithandwa sami nami neRussia yami
Ingabe abo umlando womuntu eshicilelwe ngo-1977 nango-1983.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UPeter Ustinov, okungaphezulu kakhulu komlingisi. Izincwadi zakhe nemisebenzi
Izincwadi eziqanjiwe zesayensi